OTU ABALI IKE URA OJOO PURU IDUGA ỌRIA ALZHEIMER
Home AKUKO UWA OTU ABALI NKE URA OJOO PURU IDUGA ỌRIA ALZHEIMER
Nchọpụta ohuru na-enye echiche na otu abalị ụra nke ụra nwere ike ime ka ụbụrụ beta-amyloid pụta na-eme ọrịa Alzheimer.
Ndị ọkà mmụta sayensị si n’aka National National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) mere nchọpụta ahụ.
Beta-amyloid – nke a makwaara dị ka amyloid beta – bụ protein na-adịgide adịgide nke nwere ike ịchọta n’etiti ụbụrụ ụbụrụ ma mepụta “plaques.” Ihe ndị a na-emebi nkwurịta okwu ụbụrụ, a kwenyere na a ga-arụ ọrụ dị mkpa na ọrịa Alzheimer.
Onye na-ede akwụkwọ bụ Nora D. Volkow, nke Laboratory nke Neuroimaging na NIAAA, na ndị ọrụ ibe ha bipụtara ihe ha chọpụtara na nso nso a na Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ọrịa Alzheimer bụ ọrịa na-aga n’ihu nke na-echefu ihe nchekwa na mgbanwe omume. Ọ bụ ụdị nkwarụ kachasị njọ, na-emetụta ihe dị ka nde mmadụ 5.7 na United States nanị.
Nnyocha e mere n’oge gara aga ejikọtara ụra na ụba na ọkwa beta-amyloid, mana Volkow na ndị ọrụ ibe gị na-edetu na enwere ụfọdụ nkwụsị na nyocha.
“N’agbanyeghị ihe àmà,” ka ndị na-eme nchọpụta na-ekwu, “na ụra oké ụra na-ebuli elu [beta] -amyloid n’ime mmiri interstitial na-egbu egbu na n’ime mmiri ọgwụ ndị mmadụ, ọ bụghị ọtụtụ ihe a maara banyere mmetụta nke ụra efu na [beta] -amyloid burden ụbụrụ mmadụ. ”
Iji nyere aka mee ka a ghọtakwuo otú ụra oké ụra si emetụta ụbụrụ ụbụrụ nke beta-amyloid, otu ahụ mụtara 20 ndị okenye ahụ dị afọ 22-72.
N’iji ihe omumu ihe omimi nke ihe omimi, ndi nyocha choro ibu ibu beta-amyloid n’ime ụbụrụ mgbe otu abalị nke ụra zuru ike na otu abalị nke ụra na-ehi ụra.
Mgbe otu ehihie na-ehi ụra, ndị na-eme nchọpụta chọpụtara na mmụba na ọkwa beta-amyloid n’ụdị hippocampus ziri ezi nke isiokwu ‘obi, nakwa dị na thalamus.
Hippocampus bụ mpaghara ụbụrụ nke jikọtara ncheta oge dị ogologo, na thalamus bụ ụbụrụ mpaghara nke na-etinye aka na nhazi ihe ọmụma.
MUSTAFA BUKAR, SENATOR NKE BUHARI NWURU
Dị ka ndị dere si kwuo, nchọpụta ndị a na-enye “ihe àmà mbụ maka ọrụ nke SD [ụra efu] na nchịkọta [beta-amyloid] na ụbụrụ mmadụ.”
Volkow na ndị ọrụ ibe ya na-ekwu na ha enweghị ike ikwu ma otu ụra ehi ụra nwere ike imebi nchịkọta nke beta-amyloid nke ụra na-aba ụra, ma nke a bụ ihe ha na-eme atụmatụ ichoputa na nchọpụta n’ọdịnihu.
N’agbanyeghị nke ahụ, ha kwenyere na ọmụmụ ihe ọhụrụ ha na-enye echiche na inwe ezigbo ụra abalị nwere ike ịdị oké mkpa n’ọrịa ụbụrụ anyị.
OMENKA NKE SIERRA LEONE, NABAY NWURU
Ndị na-ede akwụkwọ kwubiri, sị: “Nsonaazụ anyị na-egosipụta mkpa nke ezigbo ịdị ọcha nke ihi ụra maka ịrụ ọrụ ụbụrụ kwesịrị ekwesị nakwa dị ka ihe ga-enyere anyị aka igbochi ọrịa AD [Alzheimer].”
Akụkọ Medical News kọrọ taa.
« WILDER KWURU NA O Dị NJIKERE MAKA ANTHONY JOSHUA » BOMBU NA-EGBU 5 N’OGE EGWUREGWU FOOTBALL NA SOMALIA
Previous article WILDER KWURU NA O Dị NJIKERE MAKA ANTHONY JOSHUA
Next article BOMBU NA-EGBU 5 N’OGE EGWUREGWU FOOTBALL NA SOMALIA